How to be visible for jobseeking ? - JobExpress Myanmar
အလုပ်လျှောက်တဲ့ နေရာမှာ အရေးကြီးဆုံး အချက် က ပြောရမယ်ဆိုရင် မိမိကိုယ်ကို ပေါ်လွင်အောင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်လွင်အောင်နေခြင်းလို့ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Popular ဖြစ်ဖို့ TV channel တွေမှာ ကိုယ့်ပုံ ပါလာဖို့ ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
အလုပ်လျှောက်တဲ့ နေရာမှာ အရေးကြီးဆုံး အချက် က ပြောရမယ်ဆိုရင် မိမိကိုယ်ကို ပေါ်လွင်အောင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်လွင်အောင်နေခြင်းလို့ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Popular ဖြစ်ဖို့ TV channel တွေမှာ ကိုယ့်ပုံ ပါလာဖို့ ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိ နဲ့ ပတ်သတ်နေတဲ့ Industry က လူတွေ၊ အပေါင်းအသင်းတွေ ၊ လုပ်ငန်းရှင် Senior တွေ ၊ Recruiter တွေ Hiring Manager တွေက ကိုယ်ဘယ်သူလဲ ကို.်ဘာလုပ်လဲ ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။
ဒါမျိုးတွေ ပတ်ဝန်းကျင် သိနေမယ် ဆိုရင် တခါတလေ ကိုယ်တိုင်က အလုပ်မလျှောက်ပါပဲ နဲ့
Referral ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ကို reach out လုပ်နိုင်တဲ့ channel တွေဖြစ်တဲ့
(LinkedIn profile) ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်offer ရကြတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။
အထူးသဖြင့် ရာထူး အမြင့်ပိုင်းတွေဆို Referral ကိုပိုပြီး အားထားကြတယ်။ ယုံကြည်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ကိုင် ရှာဖွေတဲ့ နေရာမှာ ဘယ်လိုမျိူး Visible ဖြစ်အောင်နေမလဲ ဆိုတာ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) LinkedIn profile ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ထားခြင်း။
စီးပွား‌ရေးပညာရှင်တွေ‌က LinkedIn မှာProfile ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ်အနေနဲ့လည်း အလုပ်ရှာသည်ဖြစ်စေ၊ မရှာသည်ဖြစ်စေ LinkedIn လို Social Media Platfrom မျိုးမှာ Profile ကောင်းကောင်းဆောက်ပေးထားခြင်းကလည်း အလုပ်ရှာတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။
(၂) Facebook/ Instagram စတဲ့ Social Media Platfrom ပေါ်မှာလည်း ကို့ရဲ့ experience, educationနဲ့ hobbiesကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားထားခြင်း။
လူသုံးများတဲ့ Social Media တွေမှာလည်း Profile ကို ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကျွန်တော်တို့က Facebook တို့လို့နေရာမျိုးတွေမှာ ရှာလေ့ရှိတာကြောင့် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလုပ်ရှင်ဘက်ကနေ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် Professional ဆန်ဆန်တည်‌ဆောက်ဖို့လည်းမမေ့သင့်ပါဘူး။
(၃) Social Media ပေါ်က မိမိရဲ့ Account ကို Professional ဆန်ဆန် တည်ဆောက်ထားခြင်း။
ကျွန်တော်တို့က Social Media ပေါ်မှာ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့တစ်ခုထဲအတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ Account ကိုProfessional ဆန်ဆန်တည်ဆောက်ဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်ရဲ့ personal account နဲ့ အလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Accountကိုခွဲထားတာမျိုး လုပ်ခြင်းကလည်း အလုပ်ရှင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
(၄) Networking Party / Event တွေ ပုံမှန်သွားပြီး မိတ်ဆွေ ဖွဲ့ခြင်း။
အပေါင်းအသင်းများလေ အလုပ်ရှာရတာလွယ်ကူလေဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများဖို့က အိမ်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ရုံနဲ့ မဖြစ်ပါ။ Online ကနေမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းကလည်း အလုပ်ရှာတဲ့အခါ ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမဖြစ်သေးပေ။အဓိက Event တွေပုံမှန်သွားမယ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးအောင်မိတ်ဆက်ခြင်းကလည်း ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
(၅) ပြင်ပအသင်းအဖွဲ့တွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဝင်ပြီးအပေါင်းအသင်းတိုးပွားအောင် လုပ်ခြင်း။
အပေါ်မှာပြောသလိုမျိုး တစ်ခြားပြင်ပအဖွဲ့အစည်း တွေမှာပါဝင်သင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်တုန်းမှာတောင် အမြဲတမ်း ပြိုင်ပွဲတိုင်းပါတဲ့သူမျိုး၊
ပွဲတိုင်းမှာ Volunteer လုပ်တဲ့သူမျိုးတွေဆို သတိထားမိသလိုမျိုးပင်ဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာလည်း ကိုယ်ကအာ့လိုမျိုး ပွဲတော်တော်များများမှာပါဝင် နေတဲ့အခါ အလုပ်ရှင်တွေဘက်လည်း အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ နာမည်လေးကြားဖူးတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
(၆) မိမိ ကိုယ်ကို မိတ်ဆက် တတ်ခြင်း။
လူတိုင်းက ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်တဲ့အခါ လူအများရှေ့မှာပြောရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကြောက်ရွံနေတတ်ကြပါတယ်။Online ကနေမိတ်ဆက်သည်ဖြစ်စေ၊ လူတွေ့ပြောဆိုရသည်ဖြစ်စေ အဓိက ကိုယ့်ရဲ့ အကြောင်းကိုတစ်ဖက်လူက တိုတိုနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းသိဖို့ကအ‌ရေးကြီးပါတယ်။ဘယ်အလုပ်မဆို Introduce yourself ကနေစတာဖြစ်‌သောကြောင့် အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Myself ကိုစနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းမမေ့လျော့သင့်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။
(၇) Online Job Portal jobseeker profile. ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ထားခြင်း။
အခုနောက်ပိုင်းတိုးတက်လာတဲ့အမျှလူတွေက Online Job Portal တွေကိုအသုံးပြုပြီး အလုပ်ရှာလာကြပါတယ်။အရင်လို ပင်ပန်းခံပြီး Cv form ကိုင်ပြီး အလုပ်လျှောက်မဲ့အစား Job Portal တွေကို အသုံးပြုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူ အလုပ်ရှာဖို့လည်း အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဒါအပြင်
Job Portalတွေ ကောင်းကောင်းအသုံးပြုသည်ဆိုသည်မှာလည်း Jobseeker Profileကို Professional ဆန်ဆန်တည်‌ဆောက်တတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။
(၈) Cv formကိုလည်း တိုတိုနဲ့ထိထိမိမိရေးပြီး Job Portal Webiste မှာတင်ပေးထားခြင်း။
ကျွန်တော်တို့ Online Job Portal Website မှာ Register လုပ်တဲ့အခါ Cv form ကို သေသေချာချာပြင်ဆင်ပြီး တင်သင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့က အလုပ်မလျှောက်သေးဘူးဆိုပြီး Cv မတင်ထားတာမျိုးတွေရှိကြပါတယ်။တကယ်တမ်းကြ အထက်ကပြောသလိုမျိုး ကိုယ်က အလုပ်မရှာပေမဲ့ အလုပ်ရှင်က ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ်က အချက်အလက်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံမတင်ထားတဲ့အခါ Impression ကျသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
CV from မရှိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ JobExpress မှာ Resume Styles ဆိုတဲ့ Function တစ်ခုပါသောကြောင့် အလုပ်လျှောက်သူတွေအတွက်လည်း ပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်။
သင့်ဘဝဒီထက်အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ ခြေတစ်လှမ်းကို အခုပဲစတင်လိုက်ပါ။အပေါ်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ အချက်တွေအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်မယ်ဆို အလုပ်တစ်ခုရှာရတာက တကယ်တမ်းမခက်ခဲလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ အလုပ်ရှာပေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ Jobexpress job portalက Jobseeker တွေအတွက် အကောင်းဆုံးသော Featuresတွေ အလွယ်ကူဆုံး
အသုံးပြုနည်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ထိပ်တန်း companyများမှ Hiring manager များက နေ့စဉ်နဲ့အမျှဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနေတာမို့ JobExpressမှာ Register လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။